August 2020 - Khitalin Media
ဈေးတန်းထဲ ကိုဗစ် ပညာပေးသီချင်းနှင့် သရုပ်ပြခဲ့ကြသူ ကြက်ခြေနီမောင်မယ်များ အွန်လိုင်းပေါ် နာမည်ကြီးနေ
လတ်တလောကာလ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ တကျော့ပြန် ကူးစက်မှုတွေ ပိုမိုမြင့်တက်လာနေပြီး ပြည်သူအားလုံးက ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်တွေ ကို သတိပြုလိုက်နာကြရမယ့် အချိန် ဖြစ်လာနေပါတယ်။ လက်ကိုခဏခဏဆေးပါ၊ လူစုလူဝေးရှောင်ရှားပါ၊ မိမိနေအိမ်တွင်သာ နေထိုင်ပါ၊ နှာခေါင်းစည်း Mask တပ်ဆင်ပါ၊ ၆ ပေအကွာ နေထိုင်ပါ စသဖြင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဌာနက သတိပြုလိုက်နာစရာ ရှောင်ကြဉ်သင့်တဲ့ အပြုအမူတွေကို ညွှန်ကြားထားခဲ့ပေ မယ့် နိစ္စဓူဝ သွားလာလှုပ်ရှားနေကြရတဲ့ အခြေခံလူတန်းစားတွေအဖို့တော့ ဒါကို သတိမူ လိုက်နာနိုင်ဖို့ ခက်ခဲနေကြဦးမှာပါ။ ဒီအခြေအနေမှာ တာဝန်သိ ကြက်ခြေနီလူငယ်မောင်မယ်တစုက ဈေးတန်းတခုထဲ မှာ ကိုဗစ်-၁၉ ပညာပေးသီချင်းတပုဒ်ဖြစ်တဲ့ ဖြိုးပြည့်စုံနဲ့ မိစန္ဒီတို့ သီဆိုထားကြတဲ့ “ကမ္ဘာ့အပြင်သွားပါ ကိုရိုနာ” သီချင်းနဲ့အတူ ပြည်သူတွေကို ထိရောက်တဲ့ တစိတ်တပိုင်း … Read more
စိတ်မကောင်းစရာပါ ထိုင်းမှာဖြစ်သွားတာပါ …..ထိုင်းနိုင်ငံ အယုဒ္ဒယခရိုင် မဟာရတ်မြို့ကအသက် (၁၁ ) နှစ်အရွယ်သမီးငယ်လေးကို ကျောင်းမှာ ဆရာဝန်တွေက ( Cervical Cancer Vaccine ) သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကာကွယ်ဆေးထိုးလိုက်ပြီး … သိပ်မကြားဘူး ကလေးက ” ရင်ဘတ်အောင့်တယ် အောင့်တယ် ” ဆိုပြီး အန်တယ် …သိပ်မကြာပါဘူး ကလေးက သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ် ။ ပုံမှန်ဘာရောဂါအခံမှလည်းမရှိဘူးလို့မိဘတွေကရေးသားထားပါတယ် ။ ဘာ့ကြောင့်သေဆုံးတာလဲလို့မည်သူမှမှတ်ချက်မပေးထားပါဘူး ။ စာသင်ကျောင်းတွေမှာ ကာကွယ်ဆေးတွေ ယခုလို လိုက်ပြီးထိုးကြတဲ့အခါ ကလေးမှာ Fever ရှိနေလား ? မရှိဘူးလား ? ဆိုတာ ကနဦး Temperature မစမ်းသပ်မိတာလား တော့မသိပါဘူး ၊ ကလေးဟာအဖျားအနည်းငယ်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်. ၊ မကြာခင်သူ့မွေးနေ့ရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်…။ ဒါ့ကြောင့်စာသင်ကျောင်းတွေမှာဘဲဖြစ်ဖြစ် , ရပ်ကွက်ထဲမှာဘဲဖြစ်ဖြစ် … Read more
ဝမ်းသာစရာ သတင်းတခုတော့ ကြားရပါပြီ။ ပါမောက္ခကြီးတွေနဲ့ ဆရာဝန်ကြီးတွေ နေပြည်တော် တင်ပြလိုက်ပါပြီ အခုကူးစက်မှုတွေ မြင့်တက်လာလို့ အများပြည်သူ စိတ်ပူပင်သောကတွေ ရောက်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု ရောဂါပိုး (ဗိုင်းရပ်စ်) ဟာ မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလာပါတယ်လို့ သုံးသပ်ကြပါတယ်။ ရောဂါပိုး ကူးစက်မှုတော့များမယ်၊ ရောဂါပြင်းထန်နှုန်း ကစိုးရိမ်စရာမရှိနိုင်ဘဲ ပုံမှန် တုပ်ကွေးဖျားသလိုပဲ အားပျော့သွားနိုင်တယ်လို့ ဆေးပညာရှင်တွေက သုံးသပ်လာကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကွာရန်တင်း (Q)ထားတဲ့ မူဝါဒတွေ ပြောင်းတော့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေတော့ ကြားနေရပါတယ်။ ပါမောက္ခဆရာကြီများ၊ ဆရာဝန်ကြီး အများစုက နေပြည်တော်သို့ တင်ပြကြသောကြောင့် မကြီာ ကွာရန်တင်း ၂ ပတ်သာ ပြန်ဖြစ်ဖွယ်ရာရှိပါသည်။ ကွာရန်တင်း အများစုကိုလဲ နေအိမ်တွင်သာ home quarantine HQ လုပ်ဖွယ်ရာရှိပါသည်။ Swab ယူတိုင်းလဲ မ … Read more
သက်တော် ၁၀၀ကျော်ပေမယ့် ကိုဗစ်ကာလအတွင်းယနေ့အထိ ဆွမ်းခံမပျက်တဲ့ သက်တော်ရှည်ဆရာတော်ကြီး
သက်တော် ၁၀၀ကျော်ပေမယ့် ကိုဗစ်ကာလအတွင်းယနေ့အထိ ဆွမ်းခံမပျက်တဲ့ သက်တော်ရှည်ဆရာတော်ကြီးသက်တော် ၁၀၀ကျော်ပေမယ့် ကိုဗစ်ကာလအတွင်းလည်း ဆွမ်းခံမပျက်တဲ့ ဆရာတော်မစ်ခြေမြို့ သရက်တောအုပ်စုသန့်ဇင်ရွာက ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ကျောင်းတိုက်ကေတော့ သန့်စင်ရွာကမဇ္ဇျိမာကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ဦးသီဟ COVID-19က ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ေ န့စဉ်ဆွမ်းခံမှုတို မရပ်တန့်စေဘူးသက်တော် ၁၀၀ကျောက် သက်တော်ရှည် ဆရာတော် ဘုရာကြီးပါ.. ပြည်သူတွေ အားလုံး..ကုသိုလ် မပျက်စေရန် ဆွမ်းခံပေးတာပါလို့ ဆရာတော် ဘုရာကြီးမှ မိန့် တော်မူခဲ့ပါတယ်.. အားလုံး သာဓုခေါ်နိုင်ကြပါစေ Credit –a Unicode သကျတျော ၁ဝဝကြျောပမေယျ့ ကိုဗဈကာလအတှငျးယနအေ့ထိ ဆှမျးခံမပကျြတဲ့ သကျတျောရှညျဆရာတျောကွီးသကျတျော ၁ဝဝကြျောပမေယျ့ ကိုဗဈကာလအတှငျးလညျး ဆှမျးခံမပကျြတဲ့ ဆရာတျောမဈခွမွေို့ သရကျတောအုပျစုသနျ့ဇငျရှာက ပဲ ဖွဈပါတယျ ကြောငျးတိုကျကတေော့ သနျ့စငျရှာကမဇ်ဇြိမာကြောငျးတိုကျဆရာတျောဦးသီဟ COVID-19က ဆရာတျောဘုရားကွီးရဲ့ေ န့စဉျဆှမျးခံမှုတို မရပျတနျ့စဘေူးသကျတျော ၁ဝဝကြောကျ သကျတျောရှညျ … Read more
ကြာသပတေးသားသမီးများအတွက် အသက်အပိုင်းအခြားလိုက် အသေးစိတ်ဟောစတမ်း………
ကြာသပတေးသားသမီးများသည် အသက် ၁ ၊ ၉ ၊ ၁၇ ၊ ၂၅ ၊ ၃၃ ၊ ၄၁ ၊ ၄၉ ၊ ၅၇ ၊ ၆၅ ၊ ၇၃ ၊ ၈၁ ၊ ၈၉ စသည့် အသက်ပိုင်းအခြားများ၏ … ပထမ(၄)လအတွင်း အောက်ပါအဖြစ်အပျက်များဖြစ်လတ္တံ့။ ကံအနိမ့်အညံ့ ကနေ ကံအကောင်းဘက်ကို တဖြည်းဖြည်း ကူးသွားပါလိမ့်မယ်။ ညံ့တဲ့အရှိန်လေး တွေ၊ အငွေ့အသက်လေးတွေတော့ နည်းနည်းရှိနေဦးမှာပေါ့ …။ အင်္ဂါနံလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် ဆန် ၊ ဆီ ၊ ဆေး ၊ ဆား ၊ စပါး ၊ စိန် ၊ စစ်ဖက်ရေးရာ ၊ … Read more
ဝမ်းသာစရာသတင်းတစ်ခုတော့ ကြားရပါပြီ ဝမ်းသာစရာသတင်းတစ်ခုတော့ ကြားရပါပြီ။ အခုကူးစက်မှုတွေမြင့်တက်လာလို့ အများပြည်သူစိတ်ပူပင်သောကတွေရောက်ရပါတယ်။ဒါပေမယ့် အခု ရောဂါပိုး (ဗိုင်းရပ်စ်) ဟာမျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလာပါတယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်။ ရောဂါပိုး ကူးစက်မှုတော့များမယ်၊ရောဂါပြင်းထန်နှုန်း ကစိုးရိမ်စရာမရှိနိုင်ဘဲပုံမှန် တုပ်ကွေးဖျားသလိုပဲ အားပျော့သွားနိုင်တယ်လို့ဆေးပညာရှင်တွေက သုံးသပ်လာကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကွာရန်တင်း (Q )ထားတဲ့ မူဝါဒေတြပြောင်းတော့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေတော့ကြားနေရပါတယ်။ပါမောက္ခဆရာကြီများ၊ ဆရာဝန်ကြီး အမ်ားစုက နေပြည်တော်သို့ တင်ပြကြသောကြောင့် မကြာမှီ ကွာရန်တင်း ၂ ပတ်သာ ပြန်ဖြစ်ဖွယ်ရာရှိပါသည်။ ကွာရန်တင်း အမ်ားစုကိုလဲ နေအိမ်တွင်သာ home quarantine HQ လုပ်ဖွယ်ရာရှိပါသည်။Swab ယူတိုင်းလဲ မ Q ရေတာ့ဟု သိရပါသည်။Swab ကိုတော့ ပိုတိုးပြီး ယူပါမည်။မှန်ကန်ပြီး အကျိုးရှိတဲ့လမ်းပါ။ ပိုးတွေ့သော်လည်း ရောဂါလက္ခဏာမရှိသောလူနာများ မလိုအပ်ဘဲ ဆေးရုံမတင်ရန်လဲ ညှိနိင်းနေပါကြောင်း သတင်းကြားရပါသည်။ဒါမွ တကယ်လိုအပ်တဲ့ လူနာကို … Read more
August 30, 2020 by Khitalin Media
ဩဂုတ်လမီတာခ -၂၂၅ ယူနစ်ကင်းလွတ်ခွင့်ရမည် ဇူလိုင်လမှာ ယူနစ် ၁၅၀ အခမဲ့ရတယ် ။ ဇူလိုင်ဘီလ်ထဲမှာယူနစ်-၇၅ပဲပေးတယ်။ ကျန် – ၇၅ ယူနစ်ကိုဩဂုတ်လ မှာဆက်ပေးမယ်။ ဒီတော့ဩဂုတ်လမှာရမဲ့ ကင်းလွတ်ခွင့်ယူနစ် ဇူလိုင်လ လက်ကျန် – ၇၅ ယူနစ် ဩဂုတ်လအတွက် -၁၅၀ယူနစ် စုစုပေါင်း – – – ၂၂၅ ယူနစ် Zaw Min Htun source:https://latestmyanmarnews.com/ Unicode ဩဂုတျလမီတာခ -၂၂၅ ယူနဈကငျးလှတျခှငျ့ရမညျ ဇူလိုငျလမှာ ယူနဈ ၁၅၀ အခမဲ့ရတယျ ။ ဇူလိုငျဘီလျထဲမှာယူနဈ-၇၅ပဲပေးတယျ။ ကနျြ – ရ၅ ယူနဈကိုဩဂုတျလ မှာဆကျပေးမယျ။ ဒီတော့ဩဂုတျလမှာရမဲ့ ကငျးလှတျခှငျ့ယူနဈ ဇူလိုငျလ လကျကနျြ – ရ၅ ယူနဈ … Read more
အရမ်းကောင်းတယ်ဖတ်ပြီးရင် ရှယ်လိုက်ပါ အမေ့ကို အာခံ၍ပြန်မပြောခင် တစ်ခုသော နံနက်ခင်းအထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်အားအိပ်ယာမသိမ်းမိလို့မိခင်ဖြစ်သူက”ထမင်းစားချိန်မှန်းလဲမသိအပြင်ထွက်လည်းမိဘဆီ ခွင့်မတိုင်ကြည့်စမ်း ဘယ်အချိန်ရှိနေပြီလဲတစ်နေကုန် ဂိမ်းဆော့နေ. . .”အစရှိသဖြင့်ဆူပူကြိမ်းမောင်းကာသားဖြစ်သူကသီးမခံနိုင်လို့ “ဟာဗျာ…အမေကလည်းကျနော်က ကလေးမဟုတ်တော့ဘူးတစ်နေ့လုံး ဗျစ်တောက်ဗျစ်တောက်နဲ့နားငြီးတယ်…ကျနော့်ဟာ ကျနော် ကြိုက်သလိုနေပေါ့အမေမစပ်စုချင်ပါနဲ့…”လို့ သူ့အမေကိုအသံကြီးဟစ်ကျယ်နဲ့ပြန်ပြောခဲ့တယ်… အမေကတစ်လှည့်သားကတစ်လှည့်စကားများကြရာကအနီးအနားမှာထိုင်နေတဲ့အဖေဖြစ်သူကကြားပြန်ဖြေတဲ့အနေနဲ့သူ့သားကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်။”သားရေ…အဖေ့ဆီလာပါဦးကွာ”သားဖြစ်သူကခြေဆောင့်ရင်းအိမ်ပေါ်ကနေဆင်းသွားပြီးအဖေခေါ်ရာကိုလိုက်ခဲ့ပါတယ်…အဖေဖြစ်သူကသားပခုံးကို လှမ်းဖက်ရင်းအပြင်ဘက်ကို လမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ “သား..ဘာဖြစ်လို့အမေ့ကိုပြန်ပြောနေရတာလဲ””အဖေကလည်းကျနော်က ကလေးမှမဟုတ်တော့တာနေ့တိုင်းလိုလို ကျနော့်ကိုအပြစ်မြင်နေတယ်နေ့တိုင်း ဆူပူနေတယ်ကျနော် ဒီအိမ်မှာ မနေချင်တော့ဘူးဖေဖေရယ်” “အော်..သားကမေမေ့ဆိုဆုံးမစကားတွေဆူတယ်လို့ထင်နေတာကိုးမေမေ မဆူအောင်မေမေ့ပြောတဲ့အတိုင်းငါ့သားနေပေါ့ကွ””ဖေဖေလည်း မေမေ့လိုပဲသားကို မချစ်ဘူးပေါ့ “”မဟုတ်ပါဘူးသားရယ်ဘယ်မိဘကမှ ကိုယ့်သားသမီးကိုလမ်းမှားမရောက်စေချင်ဘူးကြိုတင်တားဆီးတဲ့အနေနဲ့ပြောဆိုဆုံးမနေတာ” “တော်ပြီ..ဖေဖေလည်းမေမေ့လိုပဲသားကို အကောင်းမမြင်ဘူးဆူဖို့ပဲ””ကဲ ဖေဖေတစ်ခုပြောမယ်သေချာနားထောင်””ဘာပြောမှာလဲဖေဖေသားနားထောင်နေတယ်””သားက မေမေ့ကိုတစ်ခွန်းမကျန်အာခံပြန်ပြောတယ်နော်သားသေချာစဉ်းစား” “သား ပြန်ပြောမှာပေါ့ဖေဖေနေ့တိုင်း ဗျစ်တောက်ဗျစ်တောက်ဆိုတော့ သား နားငြီးတယ်”ကဲ ဒါဆိုဖေဖေ အချက် ၁၀ ချက်ပြောပြမယ်အဲဒီအချက် ၁၀ ချက်လုံးသားလိုက်နာနိုင်ရင်သားမေ့မေ့ကို ကြိုက်သလိုအာခံပြီးပြန်ပြောလို့ရပြီ””ပြောပါ ဖေဖေ သားနားထောင်ပါ့မယ်””ဒါဆိုသေချာနားထောင် ၁။ သုံးလတိတိ သားထမင်းစားပြီးတိုင်းအန်နိုင်မလား ၊ ၂။ … Read more
တော်လိုက်တာသမီးလေးရယ် မြန်မာ့ရိုးရာ အမွေအနှစ်တွေထဲမှာ ဒီလို ကပြဖျော်ဖြေမှုတွေကလည်း တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုခေတ်က အနောက်တိုင်း ယဉ်ကျေးမှုတွေကို အတုယူပြီး လူကြီးလူငယ်မရွေး အနောက်တိုင်း ယဉ်ကျေးမှုတွေကို ပိုမိုလက်ခံ လာကြတယ်။ အခုလို မြန်မာ့ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်တွေကို ချစ်မြတ်နိုးနေတာကို မြင်ရတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေအတွက် အရမ်းကို ဂုဏ်ယူမိတယ်။ ကလေးတွေ ယခုလို မြန်မာ့ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို ချစ်မြတ်နိုးဖို့ ဆိုတာကလည်း မိဘ၊ ဆရာသမားတွေနဲ့ အများကြီး သက်ဆိုင်ပါတယ်။ မြန်မာ့ရိုးရာ အမွေအနှစ်တွေကို ပိုမို အဓွန့်ရှည် တည်တန့်ခိုင်မြဲပါစေ ဆုတောင်းရင်း စေတနာကောင်းဖြင့်။ Unicode တျောလိုကျတာသမီးလေးရယျ မွနျမာ့ရိုးရာ အမှအေနှဈတှထေဲမှာ ဒီလို ကပွဖြျောဖွမှေုတှကေလညျး တဈခုအပါအဝငျ ဖွဈပါတယျ။ ယခုခတျေက အနောကျတိုငျး ယဉျကြေးမှုတှကေို အတုယူပွီး … Read more